ကြံ့ဖွတ်ကလည်းလုပ်သဟ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ကြံ့ဖွတ်ကလည်းလုပ်သဟ…
Posted by chityimhtoo on Mar 29, 2012 in News | 14 comments
ဒီလိုလေးတောင်ရေးထားသေး…အင်း ကွာတော့ ကွာတယ် ဘာတွေကွာသွားလဲ … စည်းကမ်းပိုင်း ကွာသွားတယ်…။ ဘယ်လောက်ထိ ကွာသွားလဲ အဆင့်အတန်း မြင့်ခြင်း နိမ့်ခြင်းနဲ့ကို ကွာသွားတယ်…။ အရှိ အရှိတိုင်းဝေဖန် ရရင် စည်းကမ်း ဆိုတာ လူ့ရဲ့ တန်ဖိုးပဲ…။
လမ်းဘေးဝဲယာ ကနေ တိုးလို့ဝှေ့လို့ အားပေးပြီးကြို
နေကြတာများ အားရစရာကြီးဗျာ… အဟွတ်..အဟွတ်.
ဟေ့ကောင်တွေ ဒီမှာသတင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်နေတာမတွေ့ဘူးလား၊ သေသေ၀ပ်ဝပ်နေစမ်း။
အဲ … သူတို့လည်း .. လူတော့များသားဟ … တစ်လမ်းလုံးကိုပြည့် .. အဲ … ယာဉ်ကြောတစ်ဖက်တည်းကို ပြည့်နေတာပဲ ဟိဟိ …
အဲ့လူတွေက … မြို့နေလူတန်းစားရဲ့ .. တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ..
ထိပ်ဆုံးက ဒေါ်လှကြည်နဲ့ … တန်းစီလှည့်တာပါလား ဟိဟိ .. မအူးပင်မှာ ဒေါ်လှကြည်ပိုင်ရှင်များ အသင်းဆိုတာ ရှိတယ် …. ဆိုင်းဘုတ်ကိုမြင်ပြီး .. ပြုံးမိသွားလို့ .. အခုထိမှတ်မိနေခဲ့တာ … ။
မဆီမဆိုင် .. .. အဲ့ဒီတံတားကြီးကိုလွမ်းတယ် …. ။
တက္ကသိုလ်တက်ရင်း …သုံးလတာ နေခဲ့ဖူးတုန်းက … ညနေတိုင်း တံတားပေါ်ကနေ .. တံတားပတ်လမ်းပေါ်အထိ … စက်ဘီးပြိုင်စီးဖူးတယ် … ။
လူထုထဲက တကယ့်အားပေးထောက်ခံမှုဆိုရင် သိသာတယ်ဗျ… စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ အရပ်သားလူအုပ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ စစ်ပုံစံ တန်းစီချီတက်ခိုင်းလို့မရဘူး…။ တယောက်တပေါက်နဲ့ အရောင်အသွေး မျက်နှာပေး အမူအယာ ပေါင်းစုံဖြစ်နေရမယ်။ အခုဟာက သိသာလွန်းဒယ်…။ ဒါလေးတောင် မသိတဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေ အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ ဘယ်ပုံစခန်းသွားဂျမလဲ မသိဘူး…။ သဂျီးရေ… ပြောင်နေဘီဗျ….။
ပြောင်နေတာ မျက်နှာလား ကိုကြောင်ကြီး…။ အမေစု ဟောပြောပွဲနဲ့များ ကွာပါ့တော်…။ ဒါပေမယ့် ပြောမရဘူးနော်…။ နယ်ဘက်ကလူတွေက သူတို့လိုအပ်တာလေး လုပ်ပေးလိုက်ရင် ကျေးဇူးရှင်တွေလို ထင်တတ်တာ..။ ငါးစာကို သိပ်မသိဘူး။ ရိုးသားတာပဲ ပြောရမလား။ တွံတေးဘက်သွားတုန်းကတောင် ကားပေါ်မှာ ဟိုတစ်ခါမဲဆွယ်တော့ ကြံဖွတ်တွေ လမ်းခင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောနေသံကြားပြီး ပြုံးရသေးတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ယခုလို လမ်းဘေးဝဲယာမှ တခဲနက်ကြိုဆို ထောက်ခံ အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားးးးးးးးး
ဒါ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အရသာပါပဲ၊
ယှဉ်ပြိုင်ကြတယ်ဆိုရာမှာယှဉ်ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားနဲချက်၊အားသာချက်တွေအပေါ်၊ ရှာဖွေပြီး၊ပြိုင်ဘက်ရဲ့ အားနဲချက်ဟာ၊မိမိတို့အားသာချက်ဖြစ်စေလို့ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်၊ အဲသည်လက်တွေ့ဆောင် ရွက်ချက်တွေဟာလည်း ကျုပ်တို့ပြည်သူအတွက် စံနမူနာဖြစ်စေပြီး၊ အကျိုးဖြစ်စေရမယ်၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်၊တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့မိမိအနိုင်ရရေးကိုအောက် တန်း ကျ၊ညစ်ပတ်တာမျိုးမဖြစ်ပဲ၊ စိတ် ထားမြင့့် မြတ် စွာနဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိပြည်သူကိုသက်သေပြ၊ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာပြပြီးပြိုင်ကြရင် အားလုံးကချစ်ကြည် စွာ ကြိုဆိုကြမှာပါ။
ပြည်သူကလည်းဘယ်အဖွဲ့ကိုရွေးရွေး ပြည်သူ့အတွက်ဖြစ်နေတာပဲ ဆိုလျှင်၊သားရွှေအိုးထမ်း လာတဲ့ကိန်း ပဲပေါ့။
ပို့စ်အရ၊သူတို့က စည်းကမ်းပိုင်းနဲ့ ပြောကာ၊ပြသသော်လည်း၊လက်တွေ့မှာ လမ်းမပိတ်အောင်တန်းစီပြီး
စံနစ်ကျတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်သော်လည်း၊ဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်မဆောင်းတာ၊ရှေ့ပြေးဆိုင်ကယ်တွေလမ်းပြောင်း ပြန်မောင်းပြီး ၊ ယာဉ်စည်းကမ်းဥပဒေကိုချိုးဖေါက်နေတာပါပဲ။ သူများမျက်ချေးမြန်ပြီးကိုယ့်မြက်ချေးကိုယ်မမြင်တာပါပဲ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှုပုံစံနဲနဲ တိုးတက်လာတာကိုတော့ ကြို
ဆိုပါတယ်ဗျား၊သည်ထက်ပိုပြီး စိတ်ထားဖြူစင်၊ပြည်သူအပေါ်အနိုင် ကျင့်တာဖျောက်၊ မနိုင်ခဲ့လျှင်တောင် ရှုံးရဲတဲ့သတ္တိမွေးပြီး ပြည်သူ့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်လာလျှင်ပိုကောင်းမှာပါပဲ။
ဘကြီးရဲ့သဘောထားလေးကို လေးစားပါကြောင်း၊ စိတ်ထဲပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေ
ပြည်သူများအတွက် ကောင်းတာလေးတွေလုပ်ပေးပြီးယှဉ်ပြိုက်ကြရင် အကျိုးရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ငါတို့နိုင်ရင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာထက်၊ အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပြတာတွေ များလာရင် အများလက်ခံလာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းကင်ပြာပြောသလို အချို့ ရိုးသားသူများ ကတော့ သူ့ရပ်သူ့ရွာ နဲနဲကောင်းလာရင် အကောင်းမြင်ကြပုံကို ကျနော်လည်းမြင်တွေ့နေရပါကြောင်း၊ ဒါကြောင့်မို့ မဲဆွယ်ကြတဲ့ ပါတီတွေအားလုံး(ဘယ်ပါတီမဆို) အများ ပြည်သူ အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကို မဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊မနိုင်သည်ဖြစ်စေ များများလုပ်၍ယှဉ်ပြိုင်ကြစေလိုကြောင်း၊ ဒါမှသာ တိုင်းပြည်လဲ နဲနဲချင်း တိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကြောင်လေးထင်မြင်ယူဆမိပါသည်။
တခဲနက်ကြိုဆို ထောက်ခံလို့ တိုးလို့ဝှေ့လို့ အားပေးပြီးကြိုကြပါလား….အားရစရာကြီး သဂျီးရေ…
ဒီလိုတန်းစီပြလိုက်တော့……….ဒီမြို့မှာ ခွင်—သမားတွေဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ……..မြို့နေလူထုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ………သိမြင်မှတ်သွားခွင့်ရတာပေါ့။
နေ့တွက် ၃၀၀၀ ကျပ် ပေးပြီး ခေါ်လာတာ…